Flim2MM: Rise of the Planet of the Apes (2011)
လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခု တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ နှစ်ကြာရှည်အောင် အချိန်ယူပြီး ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ဒါတောင် ပြောင်းလဲချင်တဲ့ စိတ်ရှိမှ ဖြစ်တာပါ။ စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အားဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ခံထားပြီး ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကို လက်ခံထားတဲ့ Caesar ရဲ့အကြောင်းပါ။ မျောက်တစ်ကောင် အကြောင်းကို တင်ပြထားတယ်ဆို ပိုမှန်ပါတယ်။
Dailymail က ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရဆိုရင် လူတွေဟာ ချင်ပန်ဇီ မျောက်တွေထက် ဉာဏ်ရည်နည်းတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ လက်ခံလို့မရပါဘူး တဲ့။ Short-term Memory လိုခေါ်တဲ့ တဒင်္ဂမှတ်ဉာဏ်ကို Intelligence ဆိုတဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့မရသလိုပါပဲ။
ဆရာအောင်သင်းပြောသလိုပါပဲ။ လူနဲ့တိရိစ္ဆာန် ကွာခြားချက်က ၃ ချက် ရှိပါတယ်။ အကြောင်းကို သိခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားရှိခြင်း နဲ့ အလှအပကို ခံစားတက်ခြင်း တို့နဲ့ တိုင်းတာတဲ့အခါမှာ ကွာခြားချက်ကို သိမြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အဖက်ဖက်က ထောက်ပြပြီး တင်ဆက်ထားတာပါ။ ဒါကလည်း ဒီခေတ်နည်းပညာတိုးတက်လာမှုက ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားရဲ့ဇာတ်အိမ် အကြောင်းအရာခိုင်မာမှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Rise of the Planet of the Apes ဇာတ်ကားထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်မတန် မဖြစ်တန်စွမ်းဘူးဆိုပေမဲ့ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားဖြစ်ပြီး ဆင်ခြင်စရာလေးတွေကျန်ရှိစေမယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
CGI မျောက်တွေဖြစ်ပေမယ့် သရုပ်ဆောင်ချက်ကတော့9လောက်ရှိပါတယ်။
Myint Thu (ငှက်ကလေး-နည်းပညာ) က ဘာသာပြန်ထားပေးပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - R!B
[FORMAT]:………………………….:[ 720p WebRip x264 , 640p MP4
[GENRE]:………………………… .:[ Action, Sci-Fi, Drama
[FILE SIZE]:……………………….:[ HD- 954 MB , Small- 346 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 848 x 360, 352 x 190
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[1h 45 mins
[Translate By]:……………………..:[ မြင့်သူ (ငှက်ကလေး-နည်းပညာ)
Posted by Y Junction at 8:39:00 PM